Linux Lite 5.6 ikozvino yakavakirwa paUbuntu 20.04.3 Focal Fossa | Linux Vakapindwa muropa
Linux Lite 5.6 ikozvino yakavakirwa paUbuntu 20.04.3, inosanganisira yakagadziridzwa Papirus theme uye zvimwe zvinhu zvitsva
Chave chiri mukuvandudzwa kwemwedzi yakati wandei, asi isu tatova pano neshanduro nyowani yekuparadzirwa "kwechiedza" uku. Shure kweiyo v5.4 uye kwenguva pfupi, inogona kutorwa pasi LinuxLite 5.6 nezvinhu zvitsva zvakaita senge nyowani "Bhadhara izvo zvaunoda" modhi yekuodha pasi izvo zvinoyeuchidza zvatinoona pane yekutanga OS peji patinoenda kunotora iyo inoshanda sisitimu ISO. Zvine musoro, ichi hachisi chakanakisa chitsva, hachinei kana nehurongwa hwekushandisa, asi icho chinokwezva kutariswa.
Linux Lite 5.6 yakagadziridzwa kuita ive yakavakirwa paUbuntu 20.04.3, asi mutsauko mukuru ndewekuti vakagara paLinux 5.4, uye havana kugadzirisa kuLinux 5.11 iyo Focal Fossa inoshandisa mumazuva mashoma. Kune avo vanoda kushandisa yakagadziridzwa kernel, kugovera uku kunotipa chishandiso chekusarudza pakati pezvakawanda zvacho.
Pfungwa dzeLinux Lite 5.6
Iyo sisitimu ikozvino inogona kuiswa kubva kune inogamuchirwa skrini.
Iyo Papirus icon theme yakagadziridzwa.
7 mapikicha matsva.
Lite Tweaks ikozvino inotsigira Brave Browser.
Sarudzo nyowani "Bhadhara zvaunoda". Mamwe ruzivo nezve izvi, pano.
Python 3 nekutadza.
Yakagadziridzwa mapakeji, akadai se:
Kernel: 5.4.0-81 (tsika tsanga dzinowanikwawo kuburikidza neyekuchengetedza kwayo shanduro 3.13 - 5.14).
Rumwe ruzivo rwakadzama mu kusunungura chinyorwa.
Linux 5.6 ikozvino iripo kurodha pasi kubva peji yepamutemo, kubva patinogona kuona iyo nyowani sarudzo yekubhadhara izvo zvatinoda kurodha pasi iyo ISO. Kana isu tikasarudza "0", chinyorwa "Tenga" chinoshandura ku "Dhawunirodi" (muChirungu), chinhu chimwe chete icho icho chatakamboona mune yekutanga OS kwenguva yakareba (kana zvagara zviri zvakadai?). Iyo inogona kuvandudzwa kubva mukati meinoshanda system pachayo, asi ruzivo irwo rwekuburitsa chinyorwa runokosha kuverenga kuti uwane icho chaicho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Lite 5.6 ikozvino yakavakirwa paUbuntu 20.04.3, inosanganisira yakagadziridzwa Papirus theme uye zvimwe zvinhu zvitsva
Mumwe mubatsiri anoda kubhadharwa, kana basa racho raitwa nevamwe. Sezvo iri distro yakavakirwa paUbuntu, iye anongobata kumeso uye anotenda kuti ane kodzero yekuchaja, kungofanana neyekutanga os jetas, zvakare yakavakirwa paUbuntu, ini ndinomupa iye kumeso uye kukuchaja iwe. Ini handione zvakaipa kuti ivo vanoda kubhadharisa distro, asi kwete iyo distro iyo iyo base inoiita imwe uye iwe unongoita kusimudzira chiso. Avo veSolus OS semuenzaniso, vanogona kuibhadharisa zvakakwana, nekuti haina kubva pane chero imwe, vakaigadzira nyowani kubva pakutanga uye vakatogadzira yavo desktop, mune idzi kesi kana ini ndikaona zvakajairika kuti inobhadharirwa distro, nekuti yakagadzirwa kubva zero uye ine curre yausingandione. Mune mawonero angu, chero munhu anobhadharisa distro yakavakirwa paUbuntu, anofanirwa kupa makumi masere muzana emabhiringi avanotora kune canonical, nekuti ndiyo chete ine mvumo yekuti iwo ma distros akagadzirwa nejetas, anoshanda.
Zvinonzwika senge kubiridzira kwandiri. Nei isingasunungurwe 7.1 isingauye nayo? Ini ndinonzwisisa kuti mu ubuntu, iwe unofanirwa kurodhaunira kubva kune iyo SNAP dzidziso dzenhema asi zvirinani kuti inowanikwa. zvakadaro ... ini handioni chandinowana nekushandisa izvi pane kurodha pasi iyo yekutanga ubuntu kana lubuntu uye kuisa fluxbox - comptom - conky ...
Nei 6.4 iri yakagadzikana
Kunze kweiyo yeLite ine zita chete, ine zvido zvakafanana zveUbuntu, zve "Lite", ini ndinoda Ubuntu Mate kana kunyange Lubuntu, ndiko kuti kana iri Lite
Humberto Proano A. akadaro
Ini ndoda kudzidza uye kushandisa Linux lite 5.6 pamwe chete neWindows 10
Pindura Humberto Proaño A.
Armbian 21.08 inosvika neshanduro neCinnamon, Budgie uye nezvimwe
Dzimwe nzira kuGoogle Play kwaungawana kunyorera kweApple